'इतिहासकै तिक्ततापूर्ण' नेकपा बैठक : ... अनि मौनता तौड्दै माधव नेपाल जंगिए– यो के तरिका हो ?
दाहाल: तपाईंले उत्तेजित बनाउने ढंगले बोल्नुभएको छ। तर, हामी उत्तेजित हुनुहुँदैन। हामी शान्तसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने पक्षमा छौं। सचिवालयको बैठक किन माग गरियो ? कर्णाली घटना घट्यो, वीरगन्जमा पार्टीकै साथीको हत्याका घटना घटे, कोभिड छलफल गर्नु थियो, भारतीय रअ प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएर भेट्नुभयो, पार्टी निर्णयसम्म कार्यान्वयन गर्नुभएन। त्यसपछि बैठक बसौं भनेर पटकपटक माग गर्दा मान्नुभएन। हाम्रा निवासमा र हाम्रा पछाडि सीआईडी (सुराकी) छोड्नुभयो। त्यही भएर बाध्य भएर बैठकको अनुरोधको पत्र लेखियो। पत्रको जवाफ तपार्इंले आरोपबाट सुरु गर्नुभयो। फायर पहिले तपाईंले खोल्नुभयो। त्यसपछि जवाफ लेखेको हुँ। प्रस्ताव जे देखिएको हो, त्यही लेखेर ल्याएको हो। यो लाञ्छना हो या सत्य पार्टी कमिटीले भन्ने हो, तपाईंले होइन। अझ तपाईं को हो ? मैले ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ, छलफल हुन सक्दैन भन्ने ? किन हुन सक्दैन छलफल ? ..... दाहाल बोल्दै गर्दा ओलीले हस्तक्षेप गरे।
फेरि अबोध बालिका बलात्कृत